Uhambo lweHero - Uvuko nokubuya
Ukusuka kuChristopher Vogler "Uhambo lombhali: Ulwakhiwo lwama-Mythic"
Kwincwadi yakhe, Uhambo lombhali: Ulwakhiwo lwe-Mythic , uChristopher Vogler ubhala ukuba ukuba ibali live liphelele, umfundi ufuna ukufumana umzuzu owongezelelweyo wokufa nokuzalwa kwakhona, ngokungafaniyo neengxaki.
Le ngqungquthela yebali, intlanganiso yokugqibela eyingozi kunye nokufa. Iqhawe kufuneka lihlanjululwe ukusuka kohambo ngaphambi kokubuyela kwilizwe eliqhelekileyo. Iqhinga lomlobi kukubonisa indlela ukuziphatha kweqhawe kushintshile ngayo, ukubonisa ukuba iqhawe liye lavuswa.
Iqhinga lomfundi weencwadi kukubona ukuba utshintsho.
UVogler uchaza uvuko ngendlela yokwakha izakhiwo ezingcwele, othi, uhlose ukudala umoya wokuvuswa ngokuvalela abakhonze kwiholo elincinci elincinci, njengengxowankulu yokuzalwa, ngaphambi kokubenzela ngaphandle kwindawo evulekileyo, ukuphakanyiswa okuhambelanayo.
Ngethuba lovuko, ukufa kunye nobumnyama zihlangene enye ixesha ngaphambi kokutshatyalaliswa okulungileyo. Ingozi idla ngokubanzi kwinqanaba lebali lonke kwaye isongelo liphela kwihlabathi lonke, kungekhona nje iqhawe. Izigodo ziphezulu kakhulu.
Iqhawe, iVogler ifundisa, isebenzisa zonke izifundo ezifundwe kulolu hlobo kwaye ziguqulwa zibe yinto entsha ngokuqonda.
AmaGrike anokufumana uncedo, kodwa abafundi banelisekile xa iqhawe lenza isenzo esinqumayo ngokwayo, sithumela ukufa kwesithunzi.
Oku kubaluleke ngakumbi xa iqhawe liyingane okanye umntu omdala.
Bamele baphumelele ekugqibeleni, ngokukodwa xa umntu omdala engumntu omdala.
Iqhawe kufuneka ithathwe ngqo kumda wokufa, ngokucacileyo ulwela ubomi bakhe, ngoVogler.
Ii-climaxes, nangona kunjalo, akufuneki ukuba zixhaphaze. U-Vogler uthi abanye banjengobunene bomzimba womsindo womzwelo.
Iqhawe linokungena kwinqanaba leenguqu yengqondo eyenza isigxininiso somzimba, silandelwe ngumoya womoya okanye wemvakalelo njengoko ukuziphatha kweqhawe kunye neemvakalelo zitshintsha.
Uyabhala ukuba isigxina kufuneka sinike umvakalelo we-catharsis, ukukhululwa kwengqondo ehlambulukileyo. Ingqondo, ukuxhalaba okanye ukuxinezeleka kukhishwa ngokuzisa izinto ezingenanto engaphezulu. Iqhawe nomfundi baye bafikelela kwindawo ephezulu yokuqwashisa, ubunzima obuphezulu bokuqonda.
UCatharsis usebenza bhetele ngokubonakalisa ngokomzimba iimvakalelo ezifana nokuhleka okanye iinyembezi.
Olu tshintsho kwiqhawe luyanelisayo xa kwenzeka kwiindawo zokukhula. Abalobi bahlala benza impazamo yokuvumela iqhawe ukuba liguqulwe ngokukhawuleza ngenxa yesiganeko esinye, kodwa asikho indlela yokuphila kwangempela eyenzekayo.
Uvuko lukaDorothy luya kubuya ekufeni okubonakalayo kwithemba lokubuyela ekhaya. UGlinda uchaza ukuba unamandla okubuyela ekhaya yonke imihla, kodwa wayefanele afunde oko.
Buyela kunye noElixir
Emva kokuba inguqu yeqhawe iphelile, uya kubuya kwilizwe eliqhelekileyo kunye ne-elixir, ubutyebi obukhulu okanye ukuqonda okutsha ukwabelana. Oku kungabathanda, ubulumko, inkululeko, okanye ulwazi, uVogler ubhala.
Akufuneki ukuba ngumvuzo oyimbonakalo. Ngaphandle kokuba into ibuyiselwe kwiimeko ezibuhlungu emgodini ongaphakathi, i-elixir, iqhawe liza kuphinda liphinda i-adventure.
Uthando ngenye yezona zinto zinamandla kunye nezidumileyo zelixirs.
Ingqungquthela ivaliwe, ukuzisa ukuphilisa okunzulu, ukunyameka, kunye nokuphefumula kwilizwe eliqhelekileyo, ubhala uVogler. Ukubuya kunye ne-elixir kuthetha iqhawe linokuthi lizalise utshintsho kwimpilo yakhe yemihla ngemihla kwaye isebenzise izifundo ze-adventure ukuphilisa amanxeba akhe.
Enye yemfundiso endiyithandayo yeVogler yinto yokuba ibali lilahla, kwaye kufuneka ligqitywe ngokufanelekileyo okanye liya kubonakala liphazamisekile. Ukubuyiselwa apho umbhali egqibelela i-subplots kunye nayo yonke imibuzo ephakanyiswe kwibali. Unako ukuphakamisa imibuzo emitsha, kodwa yonke imicimbi endala kufuneka iqwalaselwe.
Amacandelwana kufuneka abe neembonakalo ezintathu ezipapashwa kulo lonke ibali, elinye kwisenzo ngasinye.
Umlingisi ngamnye kufuneka ahambe kunye neendidi ezahlukeneyo zokufunda okanye ukufunda.
UVogler uthi ukubuyela kuyithuba lokugqibela lokuthintela iimvakalelo zomfundi wakho. Kufuneka ugqibe ibali ukwenzela ukuba liyanelise okanye likhuphe umfundi wakho njengoko kuhlosiwe. Ukubuya okulungileyo kukuphazamisa imicu yecebo kunye nesantya esithile sokumangala, intlekiso engalindelekanga okanye ngokukhawuleza.
Ukubuya kwakhona kuyindawo yobulungisa bombongo. Isivakalisi sesigwebo kufanele sihambelane ngqo nezono zakhe kwaye umvuzo weqhawe ulungelelene nomnikelo owenziwa ngawo.
UDorothy uthi udibanise nabalingani bakhe kwaye unqwenela ekhaya. Emuva kwihlabathi eliqhelekileyo , imbono yakhe yabantu abajikelezile ishintshile. Uthi akayi kuphinda ahambe ekhaya kwakhona. Oku akufanele kuthathwe ngokoqobo, uVogler ubhala. Indlu iyisimboli yobuntu. UDorothy ufumene umphefumlo wakhe kwaye uye waba ngumntu odibeneyo ngokupheleleyo, ekuthinteni kunye neempawu zakhe ezintle kunye nesithunzi sakhe. I-elixir abuyiselayo ingcinga yakhe entsha yekhaya, ingcinga yakhe entsha yokuzimela.
Uhambo lweHero - Ukuwela iNgqungquthela - Iimvavanyo, iiNtshontsho, iintshaba
Iingcaphuno ezikhuthazayo zabafundi abadala
Umthetho kaRaoult Umzekelo Weengxaki - Uxube olunomdla
Ndiyakwazi ukusebenzisa i-Pine okanye iCedari yoMlilo?
Iingcebiso ezi-7 zokukhetha izicwangciso ezifanelekileyo zekhaya lakho lokuphupha
I-secos secos i-mojados y nueva situación migratoria i-cubanos
Indlela Yokuthetha Ngayo "Iimfazwe Zenkwenkwezi"
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseFisher's Hill
Konke malunga nokubuyiselwa kwabantu
Imbalela: Izizathu Zaso, amaNqanaba, kunye neengxaki
I-Best Harts Pinter's Plays